Fandraisana Serif maimaim-poana ho an'ny volana Aogositra | Famoronana an-tserasera
Ireo tsara mpamorona Fantatr'izy ireo fa ny safidin'ny endritsoratra rehefa manatanteraka tetik'asa dia mitovy ary manan-danja kokoa noho ireo singa hafa amin'ny famolavolana, izany no antony hanehoantsika amin'ity sivy ity fonos serif maimaimpoana, ho azonao ampiasaina amin'ny endrika manaraka anao na ampidiro ao amin'ny repertoire-nao.
Ao anatin'ireo loharano izay hotononinay afaka hahazo fomba maro ianao, ohatra: kanto, egyptiana, mampihomehy, sns., ankoatry ny lanjany isan-karazany, ohatra ny mahazatra, maivana, italiana, sahy ary be sahisahy, ankoatr'izay ananany fahazoan-dàlana maimaim-poana na amin'ny fampiasana ara-barotra na amin'ny an'ny tena manokana.
Ireo no fonosana Serif maimaim-poana tsara indrindra
Ity endritsoratra Serif ity dia natao manokana hampiasaina ao amin'ny famolavolana fanontana. Izy io dia misy amin'ny boaty ambany sy boaty avo, ankoatry ny fananana ny lehibe isa sy tandindona tsipelina, miaraka amina fomba mahazatra.
Hita amin'ny endrika OTF izy io.
Loharano iray io maimaim-poana, izay ny tanjony lehibe dia ny hitondra maoderina ho an'ireo loharanom-baovao ireo, mifantoka amin'ny fiolanan'ireo endritsoratra serif mahazatra ary manampy fianakaviana modely fanampiny. Mety ho an'ny boky, lohateny lehibe, afisy ary koa ho an'ny singa kanto.
Ny fianakavian'i Butler dia manana lanjan'ny modely 7, lanjan'ny 7 mahazatra ary litera 334. Ary koa, noho ny glyphs-ny mampifanaraka amin'ny fiteny samihafa. Hita izany amin'ny endrika Web sy Desktop.
Ity loharano ity dia heverina ho tsy ihany tena azo vakiana fa koa ankehitriny, ity endritsoratra ity dia misy ary maimaim-poana tanteraka, amin'ny fomba italiana sy Regular. Izy io koa dia manana kinova 16 feno.
Ny Super Serif
Izany dia fitaovana endri-tsoratra amin'ny sora-baventy, izay misy fakiteny maoderina sy tsy miraharaha. Izy io dia manana ligy 88 ary endri-tsoratra manokana hafa. Ho fanampin'ny fahatongavana amin'ny lanjan'ny Semi-Bold sy Regular. Izy io dia manana endrika TTF.
Izy io dia endri-tsoratra amin'ny sora-baventy stylish, tonga lafatra amin'ny Logos, lohateny sy afisy. Ny endriny dia TTF.
Loharano iray io tena mahafinaritra sy mora vakiana. Ny fananganana azy dia mifototra amin'ny tsipika miolakolaka tokana ary azo jerena amin'ny endrika WOFF sy OTF.
Ahitana a frenirano egyptiana izany dia misy 4 peso miaraka amin'ny sora-mandry, izay azo ampiasaina amin'ny fiteny 40 mahery hafa rehefa mampiasa abidia latina. Tonga lafatra fa tsy ho an'ny lohateny fotsiny fa ho an'izay rehetra tokony hasongadina ao anaty lahatsoratra.
endri-javatra maherin'ny 16 isan-karazany ny fomba, miovaova eo amin'ny Regular, Light, Bold, Italic ary Extra Bold ary amin'ny endrika TTF.
Loharano iray io malefaka izay manana ny maha izy azy ary mampita fahatokisan-tena betsaka koa, mba hahafahana mampiasa azy amin'ny fomba mitovy amin'ny pirinty sy amin'ny tranokala.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » loharanom-baovao » Fandraisana Serif maimaim-poana ho an'ny volana Aogositra